Mba nke Yahweh - WRSP
Aha: Mba nke Yahweh; Ọzọkwa Chọọchị nke Lovehụnanya, Yahwehs, Black Hebrew Israel
Onye guzobere: Yahweh Ben Yahweh aka Hulon Mitchell, Jr.
Bọchị ọmụmụ: October 27, 1935
Ebe amụrụ onye: Kingfisher, Oklahoma
Afọ tọrọ ntọala: 1979
Ihe kpatara ya: Iji duru ndị ojii site na ọtụtụ afọ nke mmegbu gaa ala Israel nke nkwa.
Ihe odide dị nsọ: Bible
| Nhazi: Otu ndi otu. Mgbe ị na-ewu ụlọ na nkuzi ndị Kraịst, ọpụpụ dị oke egwu nke a ga-ewere dị ka otu ịrọ òtù.
Size: The homepage na-ekwu na ihe karịrị 1300 US obodo na 16 mba ọzọ.
Nkwenkwe ndị bụ isi gụnyere Yahweh Ben Yahweh bụ nwa Chineke, ndị ojii bụ ezi ndị Juu, Chineke na Jizọs bụ ndị ojii. Chọrọ ịhapụ “ụwa rụrụ arụ” na ezinụlọ amụrụ. Yahweh choro iguzosi ike n’ihe zuru oke na ichikota nke oma n’aru ndi n’eso ya na ka ha kwuputa n’ihu ọha na ha gha anwu ma gbuo Chineke Yahweh. Ka oge na-aga, nkuzi Yahweh ghọrọ ihe ike, ike ọchịchị, na ịkpa ókè agbụrụ. O buru amụma banyere agbụrụ agbụrụ n'etiti ndị ọcha na ndị ojii, ndị a na-akpọ ndị ọcha "Ndị mmụọ ọjọọ," na n'otu ụbọchị, a ga-achụga ha maka ihu ụwa site na igbu ha.
Ihe na Nsogbu
Mba ahụ enweela akụkọ ọdịnala nke na-emetụta oke esemokwu ya na ndị mmadụ na gọọmentị nke Miami, Florida. Na Nọvemba 7, 1990 Yahweh “Ben Ben” na ndị na - eso ụzọ ya 16 “ka ekpegara ikpe” mgbe ha nwesịrị ụdị ịwakpo ụdị Waco site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ nchekwa 300. Nke a mechara na Yahweh na ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya mechara bụrụ ndị a mara ikpe maka "ịkpa nkata" ime RICO (Racketeering Influenced Corrupt Organisation) n'agbanyeghị na achọpụtaghị ha na ebubo mbụ RICO. Yahweh nọ na mkpọrọ afọ iri na asatọ. Achọpụtabeghị ozi banyere otu a nọ ugbu a.
Boyd, Herb., 1992. “Onye Ndú Ndị Isi Ojii nke Ndị Hibru Achọpụtara na E Mejọrọ Ndụ.” Akụkọ Amsterdam 4: 3.
Freedberg, Sydeny P., 1994. Nwanna Lovehụnanya: Igbu ọchụ, Ego, na Mezaịa. New York: Akwụkwọ Pantheon.
Freedberg, Sydeny P. na Donna Gehrke., 1991. “‘ Nwa Mesaịa ’na-eduga ndị na-eso ụzọ n’ime Nsogbu Iwu.” Washington Post 7: 2.
Hamill, Pete., 1991. “Mazi. Chineke na-akpọlite ​​Hel. ” Zoo 115: 34.
Johnson, Terry E., 1986. “Yahweh ụzọ.” Akwụkwọ akụkọ 108: 31.
Leerhsen, Charles., 1990. “ustgba Onyeisi ofhụnanya.” Akwụkwọ akụkọ 116: 45
Salaam, Yusef., 1996. “Yahweh tufuru arịrịọ.” Akụkọ Amsterdam 19: 1.
Salaam., 1995. “A kagburu ebubo igbu ọchụ megide Yahweh.” Akụkọ Amsterdam 6: 1.
Nke Franklin Devon Waddell kwadebere
Soc 247: Ọhụụ Ọhụrụ
Oge Mmiri, 1996
Imelite ikpeazụ: 07 / 25 / 01